The pastọ oké njọ ekpere ya na-akpa ọchị | Apg29
The pastọ oké njọ ekpere ya na-akpa ọchị
The akwụkwọ akụkọ The ụbọchị mere fun nke pastọ na-agụ ekwentị mgbe ọ na-ekpe ekpere.
Day na-elekọta mmadụ media na-agbasa pastọ si mobile Farisii mgbe ọ we duru ọgbakọ n'ekpere. M dere ihe ọ bụla banyere ya n'ihi na m chere na ozi pụrụ ịgụ a bönämne mgbe o kpere ekpere. Nnọọ eziokwu. Day na-ede na a ọhụrụ isiokwu:
- E bụ onye ozi na enyi si Ohio bụ onye nwunye nwere cancer, na-ekwu Perry Stone.
- M ekemende m ekwentị Messa ya.
Ya mere ya azịza ndị niile na-chere na ọnọdụ ahụ keukaochi bụ na e nwere ihe keukaochi mgbe nile na ya.
- Ị mere gị fun na m efu maka a pastọ bụ onye nwunye nwere cancer.
The pastọ na-akọwa na a ọhụrụ YouTube video.
Mgbe ụfọdụ, anyị kwesịrị ịchọpụta på¨varför ihe na-eme na-adịghị ikwubi. Ọ nwere ike ịbụ na ka o yiri ka ịbụ.
The ụbọchị ma eleghị anya ga-ịrịọ mgbaghara?
Mgbe ụfọdụ, o mere ka ndị mmadụ gbara m gburugburu e tiwaputara dị nnọọ ka m nọrọ m cellphone. O mere ugboro abụọ na m ga-esi n'ime ụgbọ ala. Na mgbe ahụ, m surfed ọbụna na mobile ma ọ bụ na-ele anya n'ime ya. Ọ bụ zuru ezu na m nọ na ya mgbe ahụ, ha kwubiri na m ga-sọfụ ma ọ bụ na-ekiri ya.
Ihe ọ bụla ọ bụ n'ihi na m na-amaghị, ma m chee na ha bụ ndị na-ekwo ekworo n'ihi na nke m blog saịtị Apg29. Ke adianade na-eleta ndị mmadụ m na-eji m mobile ekwentị imelite na-arụ ọrụ na m blog na saịtị. Otu n'ime ha jụọ maka mgbaghara, ndị ọzọ adịghị.
Ugbu a ị na-ekwesịghị iji na-ekwo ekworo. I nwekwara ike na-amalite a blog na-agbasa dị ebube ozioma nke Jesus Christ!